” Breaking News !!! ပုဂံကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်စာရင်း သွင်းလိုက်ပြီ” – ရှအေလငျး
အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံမြို့တော် ဘာကူမြို့မှာ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ကနေ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပနေတဲ့ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကော်မတီရဲ့ ၄၃ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုမြို့ဖြစ်တဲ့ ပုဂံမြို့ကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းသွင်းလိုက်ပါပြီ။
UNESCO World Heritage BAGAN ” ပုဂံ ” ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု့မြို့တော် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်း ဝင်ပြီဗျို့ .. မျက်ရည်ကျတယ်ဗျာ အရမ်းပဲ ဂုဏ်ယူမိတယ် စစ်မဲ့ဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ပိုမိုကျဆင်းနိူင်မယ် ထောက်ပံ့ငွေ အနည်းငယ်ရတော့မယ် ကမ္ဘာအနှံ့က ပညာရှင်တွေဆီကနေ နည်းပညာတွေ ရရှိနိူင်မယ် ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်တွေ စည်းကမ်းမဲ့ပြုလုပ်တာတွေ သိသိသာသာ လျော့ကျသွားတော့မယ်
(၁၉၉၇) ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ (၂၁) ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ကော်မတီအစည်းအဝေးက ပုဂံယဉ်ကျေးမှု့အမွေအနှစ်သည် ဥပဒေအရ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု့ မရှိခြင်း၊ တိကျသော(ဇုန်နယ်မြေ) သတ်မှတ်ချက် မရှိခြင်း၊ စနစ်ကျသော စီမံခန့်ခွဲမှု့ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ပယ်ချခံခဲ့ရဖူးပါတယ် .. ကမ္ဘာမှာ ” ပုဂံဟေ့ ” လို့ ပုဂံသူ/သားတွေနဲ့အတူ မြန်မာနိူင်ငံသားအားလုံးတို့ ပိုမိုဟစ်ကြွေးလို့ရနိူင်ပြီပေ့ါဗျာ ပထမနိူင်ငံတော် ပု ဂံ မြန်မာတွေ အားလုံးရဲ့ ပု ဂံ မြန်မာတွေ နှလုံးသားထဲက ပု ဂံ အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထား သိပ်ချစ်ရပါသော ပု ဂံ ကျွန်တော် Michael ကတော့ ” ပုဂံလမ်းက စောင့်နေပြီ ” ဗျာ ဘော်ဒါတွေ လှမ်းလာခဲ့ကြဖို့ နွေးထွေးစွာနဲ့ ကြိုဆိုနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားရင်းနဲ့ Michael Riyo (6.7. 2019 )
Credit – Myo Swe Than
အဇာဘိုငျဂနျြနိုငျငံမွို့တျော ဘာကူမွို့မှာ ဇှနျလ ၃၀ ရကျနကေ့နေ ဇူလိုငျလ ၁၀ ရကျနအေ့ထိ ကငျြးပနတေဲ့ ယူနကျစကို ကမ်ဘာ့ယဉျကြေးမှုအမှအေနှဈကျောမတီရဲ့ ၄၃ ကွိမျမွောကျ အစညျးအဝေးမှာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှုမွို့ဖွဈတဲ့ ပုဂံမွို့ကို ကမ်ဘာ့အမှအေနှဈစာရငျးသှငျးလိုကျပါပွီ။
UNESCO World Heritage BAGAN ” ပုဂံ ” ရှေးဟောငျးယဉျကြေးမှု့မွို့တျော ကမ်ဘာ့အမှအေနှဈစာရငျး ဝငျပွီဗြို့ .. မကျြရညျကတြယျဗြာ အရမျးပဲ ဂုဏျယူမိတယျ စဈမဲ့ဇုနျအဖွဈ သတျမှတျပွီ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှား ပိုမိုကဆြငျးနိူငျမယျ ထောကျပံ့ငှေ အနညျးငယျရတော့မယျ ကမ်ဘာအနှံ့က ပညာရှငျတှဆေီကနေ နညျးပညာတှေ ရရှိနိူငျမယျ ဥပဒမေဲ့လုပျရပျတှေ စညျးကမျးမဲ့ပွုလုပျတာတှေ သိသိသာသာ လြော့ကသြှားတော့မယျ
(၁၉၉၇) ခုနှဈက ကငျြးပခဲ့တဲ့ (၂၁) ကွိမျမွောကျ ကမ်ဘာ့အမှအေနှဈကျောမတီအစညျးအဝေးက ပုဂံယဉျကြေးမှု့အမှအေနှဈသညျ ဥပဒအေရ ထိနျးသိမျးကာကှယျစောငျ့ရှောကျမှု့ မရှိခွငျး၊ တိကသြော(ဇုနျနယျမွေ) သတျမှတျခကျြ မရှိခွငျး၊ စနဈကသြော စီမံခနျ့ခှဲမှု့ မရှိခွငျးတို့ကွောငျ့ ပယျခခြံခဲ့ရဖူးပါတယျ .. ကမ်ဘာမှာ ” ပုဂံဟေ့ ” လို့ ပုဂံသူ/သားတှနေဲ့အတူ မွနျမာနိူငျငံသားအားလုံးတို့ ပိုမိုဟဈကွှေးလို့ရနိူငျပွီပေ့ါဗြာ ပထမနိူငျငံတျော ပု ဂံ မွနျမာတှေ အားလုံးရဲ့ ပု ဂံ မွနျမာတှေ နှလုံးသားထဲက ပု ဂံ အမွတျတနိုးတနျဖိုးထား သိပျခဈြရပါသော ပု ဂံ ကြှနျတျော Michael ကတော့ ” ပုဂံလမျးက စောငျ့နပွေီ ” ဗြာ ဘျောဒါတှေ လှမျးလာခဲ့ကွဖို့ နှေးထှေးစှာနဲ့ ကွိုဆိုနပွေီဖွဈပါကွောငျး ပွောကွားရငျးနဲ့ Michael Riyo (6.7. 2019 )
“လှိုင်သာယာမြို့နယ်ကို အုပ်ချုပ်စီမံရတာ ခက်ခဲနေတယ်လို့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြော”
ရင်ထဲမချိအောင်.. စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်
” တရားပွဲ လုပ်ရင် ဆရာတော်ပင့်ခြင်တဲ့အခါ ဖုန်းနံပါတ် စုံစမ်း ဖို့...
နောင်ချို.. မူးယစ်ဂိတ်မှ ..ကားများကို မီးရှို့ပြီး ...
တရုတ်ပြည်ထုတ်.. ကြက်သွန်ဖြူတွေမှာ… ဓာတုဆေး …အများအပြား...